एचपीटी इन्टर स्कुल कन्टेस्ट कल्चरल शो संचालनको लागि पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न
देवी प्रसाद खनाल । प्रकाशित मिति : सोमवार, पुस ३०, २०७५
एचपीटी नेपालद्वारा यही माघ छ गते देखि फाल्गुण चार गतेसम्म संचालन हुन गईरहेको एचपीटी इन्टर स्कुल कन्टेस्ट कल्चरल शो को लागि कन्टेस्टेन्टहरुको छनौट प्रकृयाको लागि नामावली तथा सम्लग्नताको लागि पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न गरी फर्म प्रकाशन गरिएको छ ।
काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र कीर्तिपुर गरी चार स्थानका स्कुलहरुबाट कक्षा छ, सात र आठमा अध्ययनरत छात्रा तथा छात्रहरु मात्र समावेश गरी प्रत्येक चारै शहरहरुबाट चार दिनमा १५/१५ जोडी छनौट गरी छनौट प्रकृयाबाट २० जोडी छनौट गरिने छ र यिनै २० जोडीहरुलाई मात्र १५ दिने कल्चरल तालिम प्रदान गरी यही जोडीबाट सम्पूर्ण कार्यक्रम संचालन हुने कुरा आयोजकद्वारा जानकारी दिइएको छ ।
यस अन्तर्गत तालिम कार्यक्रममा दुई दिने फोटो सुट, एक दिने रेफ्रेसमेन्ट र एक दिने ट्यालेन्ट राउण्ड शो गराइने छ । उक्त कार्यक्रममा संलग्न हुने प्रतियोगिहरु मध्ये प्रथम हुनेलाई रु. एक लाख नगद, एचपीटी अवार्ड साथै स्पोन्सरद्वारा गीफ्ट ह्याम्पर, त्यस्तै द्वितीयलाई रु. ५० हजार नगद, एचपीटी अवार्ड र स्पोन्सर गीफ्ट ह्याम्पर र तृतीय हुनेलाई रु. २५ हजार नगद, एचपीटी अवार्ड र स्पोन्सर गीफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिने छ । यसका साथै अन्य जोडीहरुलाई समेत सात वटा विधामा उपाधिहरु प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस कार्यक्रममा ९ वटा विविध जात जातिका आफ्नो संस्कृति झल्किने प्रस्तुतिहरु समेत देखाइने छ । कार्यक्रमको विशेष आकर्षण अन्तर्गत विभिन्न जातिको खाद्य परिकारहरुको फुड स्टल राखिनेछ ।
यस कार्यक्रममा संलग्न हुनेलाई फारम शुल्क र फ्युजन ड्रेस बाहेक अन्य शुल्क लाग्ने छैन । यो कार्यक्रम समाज सेवा तथा संस्कृति जगेर्नाको लागि उपलब्धीमुलक हुनेछ ।
पत्रकार सम्मेलनको भिडियोः